SBS Piper Portable Ọkà okwu blu Bluetooth ọkà okwu nyochaa | Akụkọ akụrụngwa
Review nke Piper Portable Ọkà okwu Bluetooth okwu, si SBS ụlọ ọrụ
Jordi Gimenez | | Ngwa, General, Home, Foto na ụda, Noticias, Kọmputa, Telephony
Ọzọkwa anyị nwere ngwaahịa na SBS mobile ụlọ ọrụ na tebụl anyị ma anyị ji n'aka na ọ nwere ike ịmasị karịa otu n'ime gị. Na nyocha gara aga, anyị hụrụ ekweisi Stereo Zip Earset na oge a anyị nwere ya Piper Bluetooth ọkà okwu nke na-enye anyị ohere igere egwu anyị ebe ọ bụla site na Bluetooth.
Ọkà okwu a na-enye anyị nlezianya anya ma belata iji nwee ike iburu anyị na ebe ọ bụla. Otu ihe dị oke mkpa na anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe anyị chọrọ ịzụta ụdị okwu a bụ na ha na-enye anyị ezigbo ezigbo ụda yana Igwe okwu Piper Portable a nwere ike 3 Watt mmepụta, ọ na-eme. Ma ka anyị hụ ngwaahịa na ihe zuru ezu ...
Ka anyi bido akụkụ nke ọkà okwu a. Piper nwere nha ziri ezi iji nweta uru nke ngwaọrụ ahụ ma ghara ida ụda dị mma, ọ na-atụle 5,50 cm elu ihe dịka 6 cm n'obosara, mana na-eburu n'uche na ọdịdị ya dị okirikiri, nha ya dị mma iji were anyị soro anyị ọ bụla ebe. Ibu ibu nke ọkà okwu a abụghị na ọ dị elu ma ọ bụghị ọkụ, ụfọdụ 230 g na Iguzosi ike nke ya bụ ihe ijuanya na oge mbụ ị jidere ya n'aka gị ebe ọ bụ na ihe eji eme ya bụ ọla maka akụkụ nke akara ụlọ ọrụ (SBS) dị na mgbakwunye grid na plastic maka akụkụ ebe bọtịnụ ndị ahụ dị.
Kedu ụdị ngwaọrụ anyị nwere ike iji jiri igwe okwu Piper? Odi nma, ihe okwu a n’enye ayi bu nnuku ibu, ebe obu ngwaọrụ ọ bụla na nwere Bluetooth Njikọta na bụ ike nke na-akpọ music ga-dakọtara na Piper. Ọkà okwu nwere njikọta Bluetooth 2.1 ma nwee ike jikọta ya na kọmputa anyị ọ bụrụhaala na ọ nwere nkwado maka ngwaọrụ Bluetooth. Piper nwekwara oghere nke anyị nwere ike itinye kaadi Micro SD anyị wee kpọọ ọdịnaya ya.
Anyị nwekwara ọrụ nke aka adighi, yabụ ọ bụrụ na anyị na-eji igwe okwu na-ege egwu na ha na-akpọ anyị, anyị nwere ike iji nwayọ zaa site na ọkà okwu n'onwe ya ebe ọ bụ na ọ na-etinye igwe okwu ya naanị na anyị ga-pịa bọtịnụ etiti ma gwa onye na-ekwu okwu okwu ozugbo. Ezie na ọ bụ eziokwu na ụda olu mgbe anyị na-amịpụta ọdịyo dị oke mma na Piper a, ogo ịza oku ọ bụghị na ọ bụ uwe ya siri ike ebe ọ bụ na enweghị mkpọtụ na-akagbu igwe okwu ... Ka o sina dị, ọ bụrụ na ọ nwere ike ime ka anyị pụọ na ọsọ ọsọ mgbe anyị natara oku ma anyị enweghị ike ịnweta smartpohne ozugbo.
Ahụigodo na anyị nwere ya na ọkà okwu a nwere bọtịnụ isi atọ dị mkpa nke na-aga n'ihu, weghachite egwu, bulie ma wedata olu egwu ma kwụsịtụ abụ ma ọ bụ kpọọ oku. Na mgbakwunye, o nwere bọtịnụ nke abụọ ejiri gbanye ọkà okwu na ọnọdụ Bluetoth, nweta ọdịnaya nke kaadị Micro SD ma nwee ike gbanyụọ ya.
Mgbe anyị gbanyere igwe okwu, a na-acha anụnụ anụnụ na acha ọbara ọbara nke na-acha anụnụ anụnụ na-agbanye na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ mgbe ejikọtara ya na ngwaọrụ ahụ. Ozugbo batrị gwụchara, ọ na-adọ anyị aka ná ntị site na mgba ọkụ na-acha uhie uhie ma ọ bụrụ na anyị jikọọ kaadị Micro SD nke ọkụ ahụ na-acha uhie uhie. Ọ na-ewe ihe dị ka awa 2 iji mezuo ụgwọ zuru ezu ma jiri ụgwọ a anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ a nnwere onwe nke awa 5 ihe dị ka. Iji kwado ya, anyị na-agbakwunye USB na Micro USB USB na igbe ahụ, mana enweghị njikọta na mgbidi ma anyị ga-eji ekwentị ma ọ bụ buo ya ozugbo na kọmputa.
Ọ bụrụ n ’ị na - eche ịzụ igwe okwu Bluetooth ka ịnụ ụtọ egwu gị ebe ọ bụla, ọ na - adọrọ mmasị na ị tụlere nke a Piper Portable Ọkà Okwu de SBS mkpanaka n'etiti nhọrọ gị, ebe ọ bụ na atụmatụ ya na ogo nke ịmecha ya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ na-atọ ụtọ. Ga-ahụ ya na agba atọ: ọcha, nwa na acha anụnụ anụnụ ma mechaa nyocha a ị gaghị echefu ịma ego ya, nke bụ site na euro 29,90.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Review nke Piper Portable Ọkà okwu Bluetooth okwu, si SBS ụlọ ọrụ
Otu esi zoo bọtịnụ Ike na Windows 8.1
You ma ihe bụ ụzọ mkpirisi mkpirisi igodo iri na Windows?